Khubarada Amniga Oo Ku Taliyay In Dowladda Soomaaliya Cashar Ka Barato Waxa Ka Dhacay Afghanistan – somalilandtoday.com
Khubarada Amniga Oo Ku Taliyay In Dowladda Soomaaliya Cashar Ka Barato Waxa Ka Dhacay Afghanistan
(SLT- Afghanistan)-Qabsashada degdegga ah ee Daalibaan ay ku qabsatay dalka Afghanistan ayaa walaac ka muujisay inay dhiirri-gelin karto kooxaha kale ee mintidiinta ee ka dagaallama caalamka, sida Al-shabaabka ee Soomaaliya.
Khubaradu waxay ka digayaan in haddii ciidamada caalamiga ah ee halkaas jooga ay isku dayaan inay amniga ku wareejiyaan dawladda Soomaaliya, in dunidu arki karto soo noqnoqoshada wixii ka dhacay Afghanistan.
Cabdulsalaam Guled, oo ah sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la kulmi karto wixii ku dhacay Afghanistan haddii ayna soo afjarin ku tiirsanaanta ciidammada AMISOM.
Al-Shabaab ayaa u dabaal degtay dhicitaankii dawladda Afghanistan, sida ay qoreen warbaahinta wararkooda faafiya.
Cabdulsalaam Guled waxa uu sheegay in inkastoo Al-shabaab ayna lahayn awoodda millatari ee Daalibaan, haddana waxaan shaki ku jirin in ayna waxba hor istaagi doonin haddii ay doortaan jidkaas.
Bishii Abriil, ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa la wareegay qeyb kamid ah hoggaaminta hawlgallada, sida lagu qeexay Qorshaha Kala-guurka Soomaaliya oo ay oggolaadeen dawladda iyo Hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Qorshuhu waa istaraatiijiyad ay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM si tartiib tartiib ah ugu wareejin doonaan mas’uuliyadaha amniga hay’adaha amniga Soomaaliya ka hor inta ayna ciidamada AMISOM dalka ka bixin.
Bishii la soo dhaafay, millateriga ayaa sheegay in ka badan 250 dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabaab lagu dilay howlgallada millateriga Soomaaliya oo ayna caawinin AMISOM.